01/29/14 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under ဗဟုသုတ | No comments
Photoshop လေ့လာလိုသူများအတွက် CS_3 အသုံးပြုနည်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under စာအုပ်စင် | No comments
Cs-3 ဆော့ဝဲ သုံးနေသူများအတွက် အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်နဲ့နမူနာလေ့ကျင့်ဖို့ 
လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းပါပါတယ် ။ ဆော့ဝဲရှိပေမယ့် ဘေးမှာပါတဲ့ Tools တွေကို
သဘောမပေါက်ရင် အဆင်မပြေပါဘူး အဲ့ကြောင့် ဘယ် Tools က ဘာလုပ်ဖို့ လဲ
ဆိုတာသိဖို့ ပါ။ နမူနာလေ့ကျင့်ခန်း လိုက်လုပ်လို့ ရတာတွေက လိုင်စင်ပုံလုပ်ဖို့ 
ကာလာချိန်ဆပြောင်းလည်းနည်း ၊ ပန်းချီဆွဲနည်း၊ နောက်ခံဒီဇိုင်း ပြောင်းလဲနည်း
နောက်ခံကို အုတ်ကွက်နံရံ ဒီဇိုင်းထည့်နည်းအပါအ၀င် လေ့လာလို့ ကောင်းတာ
အများကြီး ရှိနေပါသေတယ် ။ Cs-3 ရှိသူများ လေ့လာ လေ့ကျင့်နိုင်ပါပြီ............။
Download Link >>> Photoshop လေ့လာလိုသူများအတွက် CS_3 အသုံးပြုနည်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း
အလုပ်များလွန်းသဖြင့် လက်ထပ်ရန် မစဉ်းစားနိုင်သေးသည့် ကိတ်ဟတ်ဒ်ဆန်
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
အသက်(၃၄)နှစ်ရှိ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးသည် မက်သရူး ဘယ်လာမီနှင့် တွဲနေသော်လည်း လက်ထပ်ရန် အစီအစဉ်သည် အလုပ်များလွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်မြောက်လာဖွယ် မရှိသေးဟု ဆိုသည်
အနုပညာ အလုပ်များဖြင့် ရုန်းကန်နေရသည့် အခြေအနေကြောင့် ချစ်သူနှင့် လက်ထပ်မည့် ကိစ္စကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးကြောင်း ကိတ်ဟတ်ဒ်ဆန်က ဝန်ခံခဲ့သည်။ အသက်(၃၄)နှစ်ရှိ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးသည် မက်သရူး ဘယ်လာမီနှင့် တွဲနေသော်လည်း လက်ထပ်ရန် အစီအစဉ်သည် အလုပ်များလွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်မြောက်လာဖွယ် မရှိသေးဟု ဆိုသည်။ Birbe Warsဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးသည် Muse ဂီတအဖွဲ့မှ မက်သရူးနှင့် (၂၀၁၁)ခုနှစ်၊ ဧပြီလကတည်းက စေ့စပ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ အချိန်ထိ မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမှု မရှိသေးခြင်းကြောင့် သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာ ကိတ်က သူမအနေဖြင့် အလုပ်များလွန်း၍ ဖြစ်ကြောင်း ညည်းညူဖြေကြား သွားခဲ့သည်။
သူမနှင့် မက်သရူး လက်ထပ်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဆိုသော ကောလာဟလများကို သတင်းသမားများက မေးမြန်းရာ ကိတ်က "မဟုတ်ပါဘူး။ ခုလောလောဆယ် အဲဒီကိစ္စကို မစီစဉ်အားသေးဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ လောလောဆယ် အရမ်းကို အလုပ်များနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက အကောင်းဆုံးမှာ ရှိနေဆဲပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ အရေးအကြီးဆုံး အရာလို့လည်း မယူဆပါဘူး။ ကျွန်မကို ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေကလည်း လက်ထပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးလေ"ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ကိတ်က "ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ လက်ထပ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ လက်တွေ့လည်း အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်တော့ လုပ်စရာတွေ များလွန်းတယ်။ လက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကို စီစဉ်ရတယ် ဆိုတာက အင်မတန် အချိန်ယူရတာပါ။ တစ်ဖက်မှာ ကျွန်မက ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်ဖို့ တာဝန်ယူရတာတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ခုလောလောဆယ်နဲ့ သိပ်မကြာခင် အတောအတွင်း အချိန်တွေမှာတော့ လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး"ဟုလည်း ရှင်းပြသွားသည်။ ကိတ်နှင့် မက်သရူးတို့သည် (၂၀၁၁)ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် သားငယ်လေး ဘင်ဟမ်ဟွမ်း ဘယ်လာမီကိုလည်း ဖွားမြင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
Graphic Design နဲ့ Professional ဓာတ်ပုံဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့ စာအုပ်
ဒီစာအုပ်လေးက Graphic Design နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါသူတွေအတွက်
လေ့လာသင့် ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ ။ ဓာတ်ပုံပညာပိုင်းကိုလည်း
အခြေခံကျကျ ရှင်းထားပါ၏ လှုရှားနေတဲ့ ပုံတွေ ဘယ်လို ရိုက်မလဲ သုံးလက်မအနီး
ကပ်ရိုက်ရင် ဘယ်လိုရိုက်ရမယ် ဆိုတာတွေကအစ အသေးစိတ် ပညာသားပါပါနဲ့ 
ရေးပြထားတာမို ဓာတ်ပုံကို တကယ်ရိုက်တတ်ချင်တယ် အနုပညာမြောက်တဲ့အထိ
ကောင်းမွန်စွာရိုက်တတ်ချင်တယ်ဆို ဒီစာအုပ်လေးက အထောက်ကူပြုပါလိမ့်မယ်
အခန်းတွေ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးပါပေမယ့် ကျနော် သဘောကျတာကို
ရွေးပြတာပါ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်.................................။
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - Graphic Design နဲ့ Professional ဓာတ်ပုံဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့ စာအုပ်
Android ဖုန်းကိုင်နေသူများနဲ့Android ဖုန်းပြုပြင်သူများအတွက်စာအုပ်
Download - Android ဖုန်းကိုင်နေသူများနဲ့Android ဖုန်းပြုပြင်သူများအတွက်စာအုပ်
Phone နဲ့ ကွန်ပျုတာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နည်း ( Android-Java-ios)
Android -Java- ios ဖုန်းအမျိုးအစုံမှာ အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်နည်းလဲပါပါတယ်
Download - ကွန်ပျုတာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နည်း
Android ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပီး အခြေခံကျကျ ရေးပြထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးပါ
ရေးသားပေးပို့ ဖြန့် ဝေစေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..................။
Founder At Collection Of Android
Admin At Android Users Group
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ -Google Drive/Root လုပ်နည်းစာအုပ်
ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဂျပန် မောင်းသူမဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘော ပြန်တွေ့နိုင်ဖွယ် မရှိတော့
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ယခုနှစ်အတွင်းတွင် ဒေါ်လာ (၅)သန်းတန် သုတေသန သင်္ဘောလေးကို ၎င်းပျောက်ဆုံးသွားသည့် နေရာဝန်းကျင်၌ (၉)ရက်ကြာ ရေငုပ်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း လုံးဝ အစအန ရှာမတွေ့ခဲ့ချေ။
ဂျပန်ရေတပ် အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန်ပိုင်း ကတည်းက အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသည့် သုတေသန ရေငုပ်သင်္ဘောလေး တစ်စင်းကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရပြီဟု ဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွင်းတွင် ဒေါ်လာ (၅)သန်းတန် သုတေသန သင်္ဘောလေးကို ၎င်းပျောက်ဆုံးသွားသည့် နေရာဝန်းကျင်၌ (၉)ရက်ကြာ ရေငုပ်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း လုံးဝ အစအန ရှာမတွေ့ခဲ့ချေ။ ရေအောက်ကြမ်းပြင် တစ်နေရာတွင် နစ်မြုပ်နေသည်ဟု ယူဆရသော မောင်းသူမဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောလေးအား မိမိတို့ လက်လွှတ်လိုက်ရပြီဟု ယူဆကြောင်း ဂျပန်ရေကြောင်း ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဝေးထိန်း စနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်သော သင်္ဘောလေးသည် ဆူဂါရူ ရေလက်ကြားနှင့် ဂျပန်ပင်မကုန်းမြေကြား ရေပြင်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟွန်ရှူးကျွန်းမှ ဟော်ကိုင်ဒိုသို့ ဦးတည်သွားလာနေစဉ် နိုဝင်ဘာလက အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသော ရေယာဉ်လေးကို ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာဖွေသော်လည်း ပြန်မတွေ့ဟု ကာကွယ်ရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ "အဲဒီ ရေငုပ်သင်္ဘောလေးက ရေအောက်ကြမ်းပြင် အခြေအနေ၊ ရေစီးကြောင်းတွေနဲ့ အပူချိန်ကို လေ့လာတိုင်းတာဖို့ အသုံးပြုတာပါ"ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းရေငုပ်သင်္ဘောလေးသည် (၃)မီတာရှည်ပြီး (၂)မီတာ အကျယ်ရှိကာ (၅)တန်မျှ အလေးချိန်စီးသည်။ ၎င်းသည် ရေပေါ်ရှိ ပင်မထိန်းချုပ်ရေး သင်္ဘောနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားပြီးကတည်းက စုပ်စမြုပ်စ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဟု သိရသည်။
မွတ်ဆလင်သူပုန်များကို အစွမ်းကုန်ဖြိုခွင်းမည်ဟု ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဆို
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ ကြာညောင်းသည်အထိ အုံကြွနေသော ခွဲထွက်ရေး စစ်သွေးကြွများကို စစ်တပ်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးစစ်ဆင်မှု ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ဘီနီဂို အကွီနိုက အဖျက်သမား မွတ်ဆလင် ခွဲထွက်ရေး သူပုန်အဖွဲ့များကို ဖြိုခွင်းရန် အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ ကြာညောင်းသည်အထိ အုံကြွနေသော ခွဲထွက်ရေး စစ်သွေးကြွများကို စစ်တပ်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးစစ်ဆင်မှု ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်များကြောင့် စစ်သွေးကြွ (၃၈)ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သလို ယင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက် မြှင့်တင်ရန် သံဓိဋ္ဌာန် ချထားကြောင်း အကွီနိုက ဆိုသည်။
အစိုးရသည် နိုင်ငံ၏ အင်အားတောင့်တင်းသော သူပုန်အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်သည့် ဘန်ဆာမိုရို အစ္စလာမ်မစ် လွတ်မြောက်ရေး စစ်သည်များ (BIFF)နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုကို စနေနေ့က ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် ချက်ချင်းလိုလိုပင် သူပုန်တပ်များ အခြေစိုက်ရာ နယ်မြေများတွင် တပ်များဖြန့်ကျက်ကာ ထိုးစစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ "လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဒီစစ်ဆင်ရေးတွေကို အလေးအနက် လုပ်ဆောင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဖိလစ်ပိုင် လူထုကို ထိခိုက်လာစေမယ့် ဥပဒေမဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို တိုက်ဖျက်သွားပါမယ်။ အဖျက်သမားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ကျဆင်းထိခိုက်သွားစေရမယ်။ သူတို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်"ဟု အကွီနိုက မနီလာမြို့တော်တွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်တွင် အင်အားအကြီးဆုံး အစ္စလာမ်မစ် သူပုန်အဖွဲ့မှာ မိုရိုအစ္စလာမ်မစ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးဖြစ်ပြီး (၁၉၇၀)ပြည့်လွန် နှစ်များကတည်းက မွတ်ဆလင်ဦးရေ ထူထပ်သည့် နယ်မြေများကို ခွဲထွက်ခွင့်ပေးရန် အစိုးရကို ထောင်ထားခြားနား တိုက်ခိုက်လျှက် ရှိသည်။ ဖိလစ်ပိုင်သည် ကက်သလစ် ဘာသာဝင် အများစု နေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နှစ်များအတွင်း သူပုန်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်သည် (၁၅၀၀၀၀)ကျော် ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
Pee Mak ထိုင်းမင်းသမီးလေး မြန်မာပြည်လာတုန်းက ဘုရားဖူးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံများ
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
Actress of Pee Mak film, Davika Hoorne, who come to Yangon and performed to the Myanmar audiences with Thai Actor Mos for Sea Game. More interesting thing is Sai Sai Kham Hlaing and many more famous singers are performed too.
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် ။ ဓာတ်ပုံ - မျိုးသူ (မြစ်မခ)
အခြေ အနေအရ လိုအပ်လာပါက ရခိုင်ပြည်နယ်အပါ အဝင် မြန်မာ ပြည်ကို ကာကွယ်ရန် အသင့်ရှိ သော်လည်း အမှားအယွင်း အဖြစ်မခံနိုင်ဟု ရခိုင်တပ်မ တော် စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်က ဆို သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၏နောက် ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ကာသွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုများမှာ တိုင်းပြည် ၏အချုပ်အခြာကို မလေးစား ရာရောက်သည်ဟု ၎င်းင်းက KNU ဌာနချုပ်၌ ဇန်နဝါရီ ၂ဝမှ ၂၆ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ သော ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များညီလာခံ၌ ပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
““တရားသည် မတရား သည်ဆိုတာထက် ဘင်္ဂါလီမှန် ပါတယ်လို့ တစ်ဘက်သတ်ပြော ဆိုတာတွေရှိတယ်။ ဒါက တိုင်း ပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာကိုမလေး စားတာပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့် ဘက်က အစစအရာရာအား နည်းတာလဲပါတယ်။ တပ်မ တော် တစ်ရပ် က တစ်ပွဲထိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်လာရင် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့အသင့် ပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒေါသအလျောက် လုပ်လို့တော့ မရဘူးပေါ့။ ဘာ လို့လဲဆိုတော့ အမှားအယွင်းအ တွက် ကျွန်တော်တို့မှာ နောက် ဆုတ်စရာ မြေမရှိ ဘူး ဗျ””ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များအ တွင်း၌ အစိုးရ၏ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုအားနည်းခဲ့သည့် အ ပြင် ယခုလုပ်ဆောင်နေသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အရအပစ်ရပ်ရေး၌ အစိုးရ ၏ပြောဆိုလုပ်ဆောင်မှုများ မှာ အပြင်ပန်းဆန်ပြီး အနှစ် သာရမရှိသည့် အချက် များ ကို တွေ့ရကြောင်းလည်း ၎င်းင်းက ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
““ကျွန်တော်တို့က လူရှေ့ သူရှေ့မှာ လက်မှတ်ထိုးပြပြီး ညာနေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် နိုင်ငံပြဿနာကို အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းပြီးပြီလား။ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူတွေပျော်ရွှင် နေကြပြီလား။ ငါတို့ အနာဂတ် အတွက် ခိုင်မာတဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလမ်း ကြောင်းတွေ ပွင့်ပြီ လားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အနှစ်သာ ရရှိရှိ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဖို့လို တယ်။ အခုအစိုးရဘက်က ပြောဆိုနေတာတွေက အပြင် ပန်းဆန်နေတယ်””ဟု စစ်ဦးစီး ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် က ပြောသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အ စည်းများနှင့်အပစ်အခတ်ရပ် စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရာ၌ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း တချို့နှင့်သာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဆိုသည့်အချက်နှင့် ကျန် ရှိနေသည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အင်အား ကြီးသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ဆန္ဒပါမှရမည် ဆိုသည့်အချက်နှင့် ပတ်သက် ၍ ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
သို့သော် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များအားလုံးပါဝင်၍ အပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုး နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲအ တွင်းပါဝင်လာရန်မှာ ကျန်ရှိ နေသည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း များ၏ သဘောသာဖြစ်ကြောင်း တစ် နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(NCCT) ဒု တိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ် ချုပ်ဂွမ်မော်က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရ တပ်မတော်မဟုတ်သည့် တိုင်း ရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ များအပါအဝင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁ဝဝကျော် ရှိကြောင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အ စည်းများထံမှ ထွက်ပေါ်သည့် စာရင်းများအရ သိရှိရသည်။
အသေခံဗုံးခွဲဖို့ အခိုင်းခံခဲ့ရတဲ့ အာဖဂန် မိန်းကလေးငယ်
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက ဟဲလ်မန်ပြည်နယ် ထဲရှိ နယ်စပ်ရဲစခန်းကို အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲပေးဖို့ ဖိအားပေး အခိုင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် အာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်က ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံး မိနစ်ပိုင်း လေးမှာပဲ သူဟာ ဖောက်ခွဲရေးဝတ်စုံကို ၀တ်ပြီး ရဲကို ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ခုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ ရောက်နေပြီဖြစ် ပါတယ်။
ဆပို့ဇ်မိုင် ဆိုတဲ့ အဲဒီမိန်းကလေးကို ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့ကတည်းက လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ထိန်းသိမ်းထား တာပါ။ အဲဒီနေ့ဟာ သူ့ကိုယ်မှာ ဗုံးတွေတပ်ဆင်ထား တာကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆပို့ဇ်မိုင်က “ကျမ အစ်ကို ဇာဟီရာနဲ့ ဂျာဘာလို့ ခေါ်တဲ့ တခြားလူတယောက် က ကျမကို အင်္ကျီဝတ် ပေးပြီးတော့ အသေခံတိုက်ခိုက်ရေးဝတ်စုံကိုလည်း ဆင်ပေး ၀တ်ပေးပါတယ်။ နောက် သူတို့က ကျမကို တခြားအ၀တ်တွေ ပေးပါတယ်။ ကျမကို ပြောသေးတာက အ၀တ်ခြောက်တထည်ကို ၀တ်ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့စခန်းထဲမှာ သွားဖောက်ခွဲခိုင်းတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
တာလီဘန်တပ်မှူးတဦးဖြစ်တဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူက သူ့ကို အားပေးခဲ့တယ်လို့ ဆပို့ဇ်မိုင်က ပြောပါတယ်။
“ကျမ အသေခံဝတ်စုံကို ၀တ်နေရင်းမှာ ကျမ အအေးမိနေသလိုပဲလို့ ကျမအစ်ကိုကို ပြောလိုက်မိတယ်။ အဲဒါ ကျမ ဒါကို မလုပ်ချင်လို့လေ။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုက သွားပြီး တိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ဖို့ ကျမကို အားပေး တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ကျမ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဆီ နီးလာတဲ့အခါကျတော့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ကျမ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမ ချက်ချင်းလိုလိုပဲ ရဲစခန်းနဲ့ ဝေးဝေးကို သွားလိုက်ပြီး ရဲတွေကို လှမ်းအော်လိုက် တာပါ။”
ဟဲလ်မန်ပြည်နယ် ရဲချုပ် ဟာမိဒ် အလ္လာ ဆီဒီချီက သူတို့ အဲဒီမိန်းကလေး ငိုနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ခုလိုပြောပါတယ်။
“ဒီမိန်းကလေးက သူ့ကို ကူညီပေးဖို့ အော်ငိုပြီး ပြောနေတာပါ။ နောက် ရဲတွေက အဲဒီနေရာကို ၀ိုင်းထား လိုက်တယ်။ ဆပို့ဇ်မိုင်ရဲ့ အစ်ကိုကတော့ လွတ်သွားပြီလေ။ ကျနော်တို့ ဒီမိန်းကလေးကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ ပါတယ်။”
တာလီဘန်တွေကတော့ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာအရဆိုရင် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ကလေးငယ် ၆၀ ကျော်ကို သောင်းကျန်း သူအဖွဲ့တွေက သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေ အဖြစ် စုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကလေးအတော်များများကို ဗုံးတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ ဗုံးတွေထောင်ဖို့ တာလီဘန်တွေက စုဆောင်းခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးငယ်လေးယောက်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖောက်ခွဲ ခိုင်းတာကတော့ ဒါ ပထမ ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန် လွတ်လပ်သော လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အဗ္ဗဒူလ် အဘစ်က “တာလီဘန် တွေက အသေခံတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ မိုင်းထောင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကလေးငယ်တွေကို သုံးတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ကြားထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုလို မိန်းကလေးတaယာက်ကို အသေခံတိုက်ခိုက်ဖို့ စေလွှတ် တယ်ဆိုတာကတော့ ဒါ ပထမဆုံးပါပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
အာဖဂန်ရဲတွေဟာ ခုတော့ လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို ရှာဖွေ နေပါတယ်။ ဆပို့ဇ်မိုင်ရဲ့ အဖေ အဗ္ဗဒူလ် ဂါဖှောဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်က ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက် ဟဲလ်မန်ပြည်နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တာပါ။ သူ့သမီးလေးကို တာလီဘန်တွေဆီကနေ မကာကွယ်ပေး နိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေက အန္တရာယ်ထဲမှာ နေရတာပါ။ ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ကယ်နိုင်ပေမယ့် ကျနော့် သမီးလေးကိုတော့ ကာကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။”
ဆပို့ဇ်မိုင်ဟာ ခုတော့ ဟဲလ်မန်ဒ်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ထဲက အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက်တွေ စီစဉ် ထားတဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာပါ။
သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်းကတော့ ဒီမိန်းကလေးကို သူ့အိမ်ဆီ ပြန်ပို့ပေးဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ကူးလို့ မယူဆကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အဗ္ဗဒူလ် အဘစ်က ပြောပါတယ်။
“ဒီမိန်းကလေးက ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မရှိသေးပါဘူး။ သူဟာ ထပ်ပြီး ဓားစာခံ ထပ်ဖြစ်ဦးမှာပဲလို့ သူကိုယ်တိုင် ပြောနေတာပါ။”
ဆပို့ဇ်မိုင်ရဲ့ အဖေကတော့ သူ့ကို တခြားပြည်နယ်တခုမှာ မြေကွက်တကွက် ပေးဖို့ သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်း ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ခဏလောက်တော့ နေချင်တယ်လို့ မိန်ကလေးငယ် ဆပို့ဇ်မိုင်က ပြောပါတယ်။
“ကျမ ဒီနေရာမှာ နေချင်ပါတယ်။ ကျမ ပြန်မသွားချင်ဘူး။ တကယ်လို့ ကျမသာ ပြန်သွားရင် သူတို့ ဒီလို ကိစ္စကိုပဲ ထပ်လုပ်ခိုင်းဦးမှာပဲ။ အရင် သူတို့လုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ အသေခံတိုက်ခိုက်ရေး လုပ်ဖို့ ကျမကို အတင်း ခိုင်းဦးမှာပါပဲ။”
အာရှဒေသ သတင်းဆောင်းပါးအတွက် သတင်းထောက် ဂါယာဝါဇီရီ က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်က နေ သတင်းပေးပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အတွက် နားထောင်ကောင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ (အမျိုးသားဆောင်ထားသင့်ပါတယ်)
အမျိုးသားတိုင်းက အဖော်ကောင်းတစ်ယောက် အမြဲတမ်းလိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား အကောင်း ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးဟာ စကားပြောတာပါ။ ဒီအခါမှာ အမျိုးသားတွေက ပိုပြီးစကားပြောကြဖို့ လိုသ လို အမျိုးသမီးများက နားထောင်သူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို အမျိုး သမီးတွေ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ဘ၀ဟာ ရိုးစင်းသလောက် အမျိုးသားတွေရဲ့ သဘောထားနဲ့ အယူအဆတွေဟာ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေး တတ်တာကြောင့် သူတို့ခံစားချက်ကို သေချာ နားထောင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှာ သာ သူတို့ကို နားလည်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတွေအလိုချင်ဆုံးကလည်း နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ယောက်ပါပဲ။
ဒီတော့ အဖော်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် နားထောင်သူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် အရင်ကြိုး စားရပါမယ်။
(၁) စကားပြောဆိုရာမှာ ပါဝင်ပါ။ သူပြောဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျွမ်းကျင်သည်ဖြစ်စေ ၊ မကျွမ်းကျင် သည်ဖြစ်စေ ပါဝင်ဆွေးနွေးပါ။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သင်ဘယ်လိုခံစားရတယ် ၊ ဘယ်အရာ ကိုတော့ဖြင့် နားမလည်လိုက်ဘူး စသည်ဖြင့် အားတက်သရော ပါဝင်ဆွေးနွေးပါ။
(၂) ယခင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မှတ်မိကြောင်းပြန်လည် ရည်ညွှန်းချက်ပေးပါ။ ဥပမာ - သူက မင်းသား လီယိုနာဒိုကိုတော့ဖြင့် ဘယ်လောက်နှစ်သက်ကြောင်း ပြောတဲ့အခါ “သြော် - ဟုတ်တယ် ။ ဟိုတစ်ခါ တုန်းကလည်း သူရဲ့ .......... ဇာတ်ကားလေးကို မင်းကြိုက်တယ်ပြောဖူးတယ်” စသဖြင့် သူ့စကားတွေ ကို အလေးထားမှတ်မိနေကြောင်း ကြုံရင် ကြုံသလို ပြသပေးပါ။
(၃) ဘယ်တော့မှ ကြားဖြတ်မပြောပါနဲ့။သူပြောတဲ့စကားကို အကြောင်းအရာ အဆုံးအထိ နားထောင်ပေး ပါ။ တကယ်လို့သူက မှားနေတယ်ဆိုရင်တောင် ပြီးဆုံးတဲ့အထိ နားထောင်ပြီးမှ ဘယ်နေရာမှာတော့ ဘယ်လို မှားနေ တယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာကတော့ နားလည်မှုလွဲနေတယ် စသဖြင့် ထောက်ပြပေးပါ။ ကြားဖြတ်ပြော လိုက်ခြင်း အားဖြင့် သူ့ရဲ့ အားတက်သရော စကားပြောနေမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး စိတ် ကသိကအောက် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ထွန်းကိုကိုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိ မှာကြော်ငြာတွေ၊ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ သူတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က သူ့အနုပညာကို ဖန်တီးပြသနေတဲ့ ထွန်း ကိုကိုနဲ့ ပွဲတစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံခိုက် သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို မေးကြည့်တဲ့အခါ ‘အခုရိုက်ထားတာက နွံထဲမနစ်တဲ့နွံနစ်ကြာတဲ့။ ဒါရိုက်တာက မလိခစိုးထိုက်အောင်၊ မင်းသမီး ကအေးမြတ်သူပါ။ ဒရာမာကားလေးပါ။’လို့ သူက ပြောပါတယ်။
လာမဲ့ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာမှထွေထွေထူးထူး စီစဉ်ထားတာ မရှိတဲ့အကြောင်း သူက ဖွင့်ဟလာတာမို့ အချစ်အကြောင်းလေးပါ ထပ်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူက ‘ချစ်သူမျးနေ့မှာ ကျွန်တော် အဘိဓမ္မာ စာမေးပွဲဖြေနေရမယ် ထင်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေကလဲ ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ ပွဲတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ထွေထွေထူးထူး မရဖူးပါဘူး။ သူများရတဲ့ဟာတွေပဲ ကပ်စားပါတယ်။ ကိုယ်ကလဲမပေးဖူးပါဘူ။ ဒီနှစ်လဲဒီလိုပါပဲ။ ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ ရရင်တော့ စားမယ်ပေါ့။ အချစ်ဆိုတာက အဓိပါယ်ဖွင့်ပြလို့မရအောင် ဆန်းကြယ်တဲ့အရာပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ မဖွင့်တတ်ပါဘူး။ မိဘတွေကတော့အနဲနဲ့ အများတော့ စိတ်ပူတာပေါ့နော်။ ရည်းစားထားမှာကို စိတ်ပူတယ်။ ကိုယ်ကလဲ တစ်ယောက်တည်း အငယ်ဆုံးလဲ ဆိုတော့လေ။ ဒါပေမဲ့လဲ သင့်တော်တဲ့သူနဲ့တော့ ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုပဲ ရွေးခိုင်းတာပါ။ မိဘနဲ့လဲအဆင်ပြေ၊ ကိုယ်နဲ့လဲ အဆင်ပြေပေါ့နော်။ ငယ်ငယ်တုန်းက နားလည်ထားတာက အချစ်ဆိုတာဖူးစာပေါ့နော်။ အခုက ဦးရာဖြစ်သွားပြီ။ ရွေးချယ်ရင်တော့ မိန်းမပီသရမယ်။ မြန်မာဆန်ရမယ်။ အိမ်တွင်းမှုနိုင်ရမယ်။ ဒီ၂၀၁၄ မှာယူမဲ့သူတွေကိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။၂၀၁၄ ထဲမှာတော့ ကျွန်တော့်ဇာတ်ကားလေးတွေ ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်’တဲ့။
တရုတ်ပြည် ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အွန်လိုင်းဂိမ်း ဆော့ကစားသူ အများဆုံး နိုင်ငံ အဖြစ် စံချိန်တင် ထား ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဂိမ်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပေါက်ပေါက် ရှာရှာ ဖြစ်ရပ်များလည်း အမြဲလိုလို ဖြစ်နေ ပါ တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ Sanxiang City မှာ သားသမီး ၃ ဦး စလုံးကို ရောင်းချပြီး ဂိမ်း ဆော့ခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးထောင်ကျကြောင်း သိရပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုး ဂိမ်မာ လူငယ် အမျိုးသမီနဲ့ အမျိုးသားတို့ဟာ အွန်လိုင်းဂိမ်း တစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂိမ်းဆိုင်တစ်ခုမှာ ချိန်းတွေ့ ဂိမ်းအတူဆော့ရင်း ချစ်ကြိုက်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ပြု နေထိုင်ကြပြီး အသက် ၂၁ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ လူငယ် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက ပထမဆုံး သားဦးမွေး ပါတယ်။ သားဦး အသက် လပိုင်းပဲ ရှိနေသေးချိန်မှာ အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့ပြီး ဂိမ်းသွားဆော့ တဲ့အထိ ဂိမ်းစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုတိယမြောက် သမီးမွေးလာချိန် ငွေကြေး အဆင် မပြေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ဒုတိယ သမီးကို ရောင်းချခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်သာ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ယင်းငွေကို ဂိမ်း အတွက် အသုံးပြုပြီး ဆော့တာ အချိန်မကြာပဲ ကုန်သွား ပါတယ်။
ဒီတော့ ဂိမ်းအတွက် ကလေးရောင်းလို့ ငွေရှာနိုင်တာ သိတော့ သားဖြစ်သူ ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ရောင်းချခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီငွေကုန် သွားချိန်မှာတော့ နောက်ထပ် သားတစ်ယောက်ကိုမွေးပြီး ဈေးကြီးရောင်းချ ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကလေး ဖြစ်သူကို ရောင်းချလိုက်ချိန်မှာ ၎င်းတို့ မိဘ ဖြစ်သူတို့ သိရှိ တွေ့ရှိ လိုက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြား ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် စေခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
အသဲပုံ မျက်နှာလိုချင်လို့ ကိုရီးယားမလေး ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့
ယခင်က လှပနေတဲ့ ရုပ်ရှည်ကို ဂျပန်ကာတွန်းမလေးတွေ လို မှေးစေ့ချွန် ချွန် အသဲပုံ ပုံသဏ္ဍာန်လိုချင်တာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြုပြင် လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမရဲ့  ခွဲစိတ်မှုဟာ အန္တရာယ် အင်မတန် များပါတယ်။ အသား အရည်တင်မဟုတ်ပဲ အရိုးအကြောများကိုပါ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတာမို့ သေစေတဲ့ ခွဲစိတ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မှု ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီနဲ့ ပက်သက်လို့ တောင်ကိုရီးယား မှာ ဥပဒေ သစ်များ ပြန်ထုတ်ရမယ် လို့တောင် ဝေဖန်နေကြ ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ ပြုလုပ်မှုအများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် စံချိန်တင် ထားပြီး အများဆုံးမြို့ က ဆိုးလ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို့ က ၅ ဦးမှာ ၁ ဦးက ပလပ်စတစ်စ် ဆာဂျီပြုလုပ်တဲ့အထကိုအရေအတွက်က အင်မတန် များပါတယ်။ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး အသက်အပိုင်းအခြားကတော့ ၁၉ ခုနှစ်ကနေ ၄၉ နှစ်ကြား ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် ပြုပြင်မှုက မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ဖြစ်ပေမယ့် ပုံထဲက အမျိုးသမီးလို့ အသဲပုံကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ အာရှသူ အချို့ လိုချင်ကြတဲ့ မျက်နှာထားဖြစ်ပြီး သူမကတော့ တကယ်ပြုလုပ်ယူခဲ့ ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပြုပြင်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်က ကြည့်ရှုသူတို့ကို အံ့သြမင်သက်စေခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
တရုတ်နှင့် ပေါင်းပြီး သစ်ခိုးထုတ်သည့် အဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ဟုဆို
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under သတင်းများ | No comments
ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် ၂၀၁၄
သစ်ခိုးထုတ်မှုများကို စီမံချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်သော သစ်ခိုးထုတ်သည့်အဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လအတွင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်သုံးခုအတွင်း ကျွန်းသစ်အပါအ၀င် သစ်မျိုးစုံ တန်ချိန်သုံး ထောင်ကျော်ကို ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ် ကား ၈၉ စီးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့သည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ပါဝင်သည့်အဖွဲ့သည် တရားမ၀င်သစ်ခုတ်လှဲလေ့ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပြီး ၀န်ကြီးဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ကျောက်မဲခရိုင်နှင့် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်များတွင် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ထုက်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“လစဉ်ဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်တွေရှိတယ်။လျှပ်တစ်ပြက်ဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်တွေလည်းရှိတယ်။ သတင်းရရှိလို့ ဖမ်းဆီးတာလည်း ရှိတယ်၊ ဒေသခံများက တိုင်ကြားတဲ့အတွက် ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်တာ လည်းရှိတယ်” ဟု ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
အဖိုးတန်သစ်များကို ဒေသလုံခြုံရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အားနည်းမှုနှင့် အကန့်အသတ် အခြေ အနေများကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တစ်ဖက်နိုင်ငံသားများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး တရားမ၀င်ခိုးထုတ်ရာတွင် တရားမ၀င် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရားမ၀င် သစ်ခိုးထုတ်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံအကူအညီများ အပါအ၀င် လုံခြုံရေးကိုလည်း ဒေသအလိုက် ရဲဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေသခံများ၏ သတင်းအချက်အလက်ပေးမှုပေါ်မူတည်ပြီး နေရာဒေသအလိုက် ချက်ချင်းဖမ်းဆီးခြင်းများလည်း ဆောင် ရွက်နေပြီဟု ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအတွင်း ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့သည် ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ပိတောက်၊ တမလန်း၊ စကား ၀ါ၊ သစ်ရာ၊ အင်ကြင်း စသည့် သစ်များအပါအ၀င် တန်ချိန် ၃၂၄၃ ဒသမ ၂၈၆၃ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။
စီမံချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်မှ ၁၉ ရက်အတွင်း သစ်လုံးခွဲသား စုစုပေါင်း ၇၂၈ တန်ကျော် ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး မန္တလေး-မူဆယ် ကားလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ် ကားအစီး ၇၀ ပေါ်တွင် သယ်ဆောင်လာသော ၁၂၅ ဒသမ၁၂ တန်နှင့် မန်စီမြို့နယ်၊ နန်းဟန်ကျေးရွာ အနီးတွင် ၉၂၈ တန်နှင့် ကရိန်းယာဉ် ငါးစီးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက်မှ ခြောက်ရက်တာကာလအတွင်း ပိတောက် နှင့် တမလန်းသစ် စုစုပေါင်း ၁၅၈၇ တန် နှင့် သစ်တင်ယာဉ် ၁၄ စီး၊ လက်ကိုင်လွှစက် ငါးလုံး၊ သစ်ခွဲအင်ဂျင်နှစ်လုံးကို ရှာဖွေဖော် ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တရားမ၀င်သယ်ဆောင် တင်ပို့မည် အဖိုးတန်သစ်များထပ်မံပြီး ရှာဖွေဖော်ထုတ် ဖမ်း ဆီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်း သစ်မှောင်ခိုဝယ်ယူနေသူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (အပိုင်း ၂)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မောင်းတောမြို့မှာ လတ်တလောဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် သံတမန်တွေနဲ့ သံအမတ်ကြီးတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် တွေကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ တခု မနေ့က လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်းလင်း၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရခိုင်ပဋိပက္ခစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင် ၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်။
သံတမန်များနှင့် သံအမတ်ကြီးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှမေးမြန်းချက်များ ကို ပြန်လည်ဖြေကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အပိုင်း ၁
ဂူဂဲလ်မြေပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ
ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ဇင်းမင်းရာဇာ ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲဒီ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က အခုလို ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။
မနေ့က ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုကလည်း အခုလို ရှင်းလင်းသွားပါ တယ်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်း၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်ကတော့
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under ဗဟုသုတ | 1 comment
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက် ရောဂါရော ရနိုင်ပါသလားဆရာသူက ဒီလထဲဆို အပြီးပြန်လာတော့မှာဆိုတော့ သာယာတဲ့ အ်ိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒီကိစ္စက တစ်ခါတစ်လေဖြစ်နိုင်တယ် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကို သူ့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောထားချင်လို့ပါ ဆရာ။
(၅) ရောဂါ ရနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးက အတင်း လုပ်ရင် စအိုကွဲနိုင်ပါတယ်။ လူကြားမကောင်း၊ သူကြားမကောင်း၊ ဆရာဝန် ပြရလည်း ခက်၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးထည့်ရလည်း ခက်ပါတယ်။ ဒုတိယက ဆက်ဆံဖန်များရင် စအိုဝမှာ အင်္ဂါဇာတ်လိုပဲ နှုတ်ခမ်းသားတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ တတိယက ရောဂါပေါင်းစုံ ၀င်နိုင်တာပါပဲ။ အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။http://www.webmd.com/sex/anal-sex-health-concernss ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ငြင်းချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါ။ သူ့စအိုထဲကို သူ့လိင်တံနဲ့ အရွယ်အစား တူတဲ့ သခွားသီးတစ်လုံးကို သူ့လိင်တံ အရှည်အတိုင်း အရင် အသွင်းခိုင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် လိင်ဆက်ဆံသလို အဲဒီ့ သခွားသီးကို ညည်းလက်နဲ့ ခပ်သွက်သွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သူ ကျေနပ်တယ်၊ အားရတယ်၊ ဇိမ်တွေ့တယ်ဆိုရင် ညည်းလည်း လက်ခံပါ့မယ်ပေါ့။
လုံခြုံရေးကြောင့် မာလာလာ စာအုပ်ရောင်းပွဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်ရ
ကလေးငယ်တွေ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ဆက်ကျော်သက်အရွယ် Malala Yousafzai ရဲ့ အတ္တုပတ္တိ စာအုပ်ရောင်း
ချပွဲမှာ လုံခြုံရေးမပေးတဲ့အတွက် စာအုပ်ရောင်းချပွဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်ရ
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မာလာလာဟာ ကလေးငယ်တွေ ကျောင်းတက်တဲ့ အခွင့်အရေးရရှိဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက တာလီဘန်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ လုပ်ကြံမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
အသက်မသေတဲ့ မာလာလာဟာ ခုအခါမှာ အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ စာသင်ခန်းထဲကတဆင့် ကလေးငယ်တွေ စာသင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာတွေ၊ နောက်ပိုင်း နယ်တွေသွားပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာတွေ၊ သူလုပ်ကြံခံရမှုတွေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်မှု ရလာတဲ့အကြောင်းတွေကို ရေးသားထားတဲ့ I Am Malala ကျမ မာလာလာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ ပြုလုပ်တဲ့ စာအုပ်ရောင်းချပွဲမှာ မာလာလာ ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်တာ မလုပ်ပေမယ့် ရဲတွေက လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ဘူးလို့
ငြင်းဆိုပြီးနောက် စာအုပ်ရောင်းပွဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။
ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ဖိအားပေးမှု၊ တက္ကသိုလ်အရာရှိတွေရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် ရဲတွေက လုံခြုံရေးပေးဖို့ ငြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မာလာလာ စာအုပ်ရောင်းချဖို့ တာဝန်ယူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အာဏာပိုင်တွေက တာလီဘန်ကို အမျက်ဒေါသ မထွက်စေတဲ့အတွက် ခုလို လုပ်ဆောင်တာလို့ စွပ်စွဲလိုက်ပြီး စာအုပ်ရောင်းချပွဲကို နောက်ပိုင်းမှာ လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေကလည်း လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်ရသလို တခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ တုန့်ပြန်ထားပါတယ်။
တချို့ကလည်း အမေရိကန်က ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ပိုရအောင် စာအုပ်ကို ဘန်းပြရောင်းချတာလို့ ပြောဆိုနေပါတယ်။
မာလာလာကို ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးက လူတွေ ချစ်ခင် အားပေးကြပေမယ့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့ သူ့အပေါ် ချစ်ခင်သူရှိသလို မုန်းတီးမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ မာလာလာရဲ့ အယူဝါဒဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဆန့်ကျင်သလို ပါကစ္စတန် ဥပဒေနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်တယ်လို့ ပြောဆိုနေကြ
နှုတ်ထွက်ကြမ်းသော အမ္ဗပါလိ၏ ဘ၀ကံကြမ္မာ
အမ္ဗပါလိသည် ဝေသာလီပြည်၌ အလှဂုဏ်တို့ဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပြည့်တန်ဆာမတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သိခီဘုရားရှင်လက်ထက်၌ ရဟန်းမ ပြုခဲ့ပြီး မိခင်ဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေနေရ သည်ကို စက်ဆုပ် သဖြင့် ဥပပတ် ပဋိသန္ဓေနေရန် ဆုတောင်း ခဲ့သောကုသိုလ်ကြောင့် ယခုဂေါတမ ဘုရားရှင် လက်ထက်ဝယ် ဝေသာလီပြည် မင်းဥယျာဉ်အတွင်းရှိ သရက်ပင်ဂွကြား၌ ဥပပါတ် ပဋိသန္ဓေ (ခန္ဓာကိုယ် အထင် အရှားဖြင့်) လူဖြစ်လာသူဖြစ်သည်။
သူမသည် ဖုဿဘုရားရှင်လက်ထက်က ဘုရားရှင်၏နှမတော် ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရုပ်အဆင်းလှပစေရန်ဆုတောင်းခဲ့သောကြောင့် ယခု ဘ၀တွင် တုနှိုင်း မမှီအလှရှင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သရက်ပင်ဂွကြားတွင်လူဖြစ်ခဲ့ရသောကြောင့်အမ္ဗပါလိဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အမ္ဗပါလိ၏အလှသည် အလွန်ကြည့်မ၀ ရှုမ၀ဖြစ်ခဲ့ရ၍ ဝေသာလီရှိ လိစ္ဆ၀ီမင်းသားတို့ သူရထိုက်သည်ငါရထိုက်သည် အငြင်းအခုံဖြစ်ကြလေသည်။ ထိုအခါဝေသာလီခေါင်းဆောင်တို့က ထိုငြင်းခုံခိုက်ရန်ငြိမ်းမှုအေးစေရန် အမ္ဗပါလိသည် မင်းသားအားလုံးတို့နှင့်ဆိုင်စေဟု အမိန့်ချကာ အများဆိုင်ပြည်တန်ဆာမ ပြုလုပ်စေသည်။
သူမနှင့်တစ်ခါသွားပျော်ပါးလိုပါက အသပြာငါးဆယ်ပေး၍ သွားလာရန်လည်း သတ်မှတ်ထားသည်။အမ္ဗပါလိသည်ရာဇဂြိုလ်ပြည် ဘုရင်ဗိမ္ဗိသာရမင်းသားနှင့် တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်ကြိုက်ခဲ့၍ သားတော်တစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုသားတော်လည်း နောင်အခါ ဘုရားသာသနာ၌၀ိမလကောဏ္ဍညမထေရ်ဟုထင်ရှားခဲ့သည်။အမ္ဗပါလိသည် ပြည်တန်ဆာအဖြစ်နေလာခဲ့ရာမှအသက်အရွယ်အိုမင်းလာသော်ဘုရားရှင်နှင့်ဖူးတွေ့ရပြီးဘုရားရှင်ကို
ဆွမ်းကျွေးကာ တရားနာခဲ့သည်။ မိမိဥယျာဉ်၌လည်းကျောင်းဆောက်၍ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာကို လှူဒါန်းသည်။ မိမိ၏ သားတော်အရှင်ကောဏ္ဍညမထေရ်ထံမှ တရားနာပြီး ရဟန်းမ ပြုခဲ့သည်။
သူမသည်အိုမင်းလာသောမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယှဉ်ကြည့်၍၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရာမကြာခင်ဆဠာဘိညာပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တရဟန္တာမ ဖြစ်ရလေသည်။သူမသည်ရဟန္တာမဖြစ်ပြီးနောက်မိမိဘ၀ပြည့်တန်ဆာမ ဖြစ်ရသည့် အကုသိုလ် အပြစ်ကို ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့သည်။ သိခီဘုရားရှင်လက်ထက်ကဖြစ်သည်။ အမျိုးကောင်း သမီး တစ်ဦးသည် သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ကာ ရဟန်းမပြုခဲ့သည်။
ထိုရဟန်းမသည် တစ်နေ့တွင်အဖော်ရဟန်းမများနှင့်အတူ စေတီကို ရှိခိုး၍ လက်ယာရစ် လှည့်လည် ပူဇော်စဉ်ရှေ့ဆုံး မှသွားနှင့်သော ရဟန္တာထေရီမတစ်ပါးသည်နှာချေသဖြင့် နှာရေပေါက်သည်စေတီ ရင်ပြင်ပေါ်၌ အမှတ်တမဲ့ ကျသွားလေသည်။
ထိုနှာရေပေါက်ကိုမြင်လျှင် ရဟန်းမသည် ဒေါသဖြစ်လျှက် “ဘယ်ကပြည်တန်ဆာမဒီမှာတံတွေးထွေးခဲ့ပါသလဲ“
ဤနှုတ်ထွက်ကြမ်းသောစကားကြောင့်သူမသည်ငရဲ၌နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ရပြီးငရဲမှလွတ်ပြီးနောက်ဘ၀ပေါင်းတစ်သောင်း တိုင်တိုင် ပြည့်တန်ဆာမ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ယခုနောက်ဆုံး ဘ၀၀ယ် ထိုအကုသိုလ်ကံ ၀ဋ်ကျွေး ကလိုက်လာပြီး ပြည့်တန်ဆာမဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်။ဆဠဘိညာပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တရဟန္တာမလောင်ကြီးပင်လျှင်တစ်ချက်မှားသော ၀စီနှုတ်ထွက်စကားကြောင့် ဤမျှဆိုးဝါးသော ပြည့်တန်ဆာမဘ၀သို့ ရောက်ခဲ့ရသည်။
နှုတ်ထွက်ဝစီကြမ်း ဘေးဘျမ်းများသည်ကို သတ်ပြုကြပါလော့။
တက္ကသိုလ်သျှင်သီရိ (ဓမ္မာစရိယ၊ ဘီအေ)
သားသမီး လိုချင်သူများ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သော အချက်များ
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under ကျန်းမာရေး | No comments
သားသမီး လိုချင်သူတွေ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ သိရှိထား သင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
(၁) အသုံးပြု နေသော သားဆက်ခြား နည်းများ ကိုရပ်ပါ
သားသမီး မလိုချင် သေးလို့ ပဋိသန္ဓေ တားဆေး၊ ထိုးဆေးတွေ အသုံးပြုတာ၊ ကွန်ဒုံးသုံးတာ၊ အမျိုးသမီး သန္ဓေတား ပစ္စည်းထည့်တာ စတဲ့နည်း တွေနဲ့ သန္ဓေတားခဲ့တယ် ဆိုရင် သားသမီး လိုချင်ပြီဆို ရင်တော့ ဒီနည်းတွေ ရပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပဋိသန္ဓေတား နည်းတွေကို ရပ်လိုက်ပေမယ့် ချက်ချင်း သားသမီး မရနိုင်တာမျိုး ဖြစ် တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပဋိသန္ဓေ တားဆေး၊ ထိုးဆေးတွေက သုံးတာကို ရပ် လိုက်ပေမယ့် ကလေး ချက်ချင်း မရနိုင်ပါ။
(၂) ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါ
သွေးဖိအား၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ကူး စက်မဟုတ်တဲ့ နာတာ ရှည်ရောဂါ (ဆီးချို သွေးချို) ရှိ၊ မရှိတွေကို ဆရာဝန်ထံ ပြသ စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ မိခင်က ကျန်းမာ မှ ကျန်းမာတဲ့ ရင်သွေးကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
(၃) ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စွာ စားသောက်ပါ
သားသမီး ရယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မိခင်လောင်း တစ်ယောက်ဟာ အစားအသောက်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး မျှတစွာ စားသောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အသားဓာတ်၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ ကောက်နှံ ကွေကာ တွေကို အဓိက စားသုံးပြီး အချို၊ အဆီနဲ့ အဆင်သင့် ပြုပြင်ထားတဲ့ အစာတွေ ကိုတော့ လျော့စား သင့်ပါတယ်။
(၄) ဖောလစ်အက်စစ် ဖြည့်စွက် သောက်သုံးပါ
ဖောလစ်အက်စစ်က ဖောလိတ်ရဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့ ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပြီး သန္ဓေသားမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်း ချက်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချ ပေးပါတယ်။ သန္ဓေသားမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်တာက ကိုယ်ဝန်ရှိပြီလို့ မသိရှိ ခင်ကတည်းက ဖြစ်နေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်လောင်းတွေ အနေနဲ့ သားသမီး ယူဖို့ ကြိုးစားနေချိန် ကတည်းက ဖောလစ်အက်စစ်ကို ဖြည့်စွက် သောက်သုံးဖို့ FDA အကြံပြု ထားပါတယ်။
(၅) ဆေးလိပ်နှင့် အရက်ဖြတ်ပါ
သားသမီး ယူဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ တွေကို ဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေသုံးစွဲတာက အမျိုး သားတွေရဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်း စေတာကြောင့်ပါ။ ခရိုမိုဇုမ်းပျက်စီးတာ၊ သုက်ကောင် လေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားကူးခတ် နိုင်စွမ်းလျော့နည်းတာ၊ ပန်းသေပန်းညှိုးတာ စတာတွေကြောင့် အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေတာပါ။
(၆) ဓမ္မတာ စက်ဝန်းကို သိရှိပါစေ
ရာသီလာပြီး ၁၄ ရက် မြောက်နေ့မှာ သားဥ ကြွေကျပြီး သားသမီး ရရှိနိုင်တဲ့ နေ့ပါ။ ဒီလို ရက်မျိုးမှာ အမျိုးသားနဲ့ အတူ နေတာက သားသမီး ရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်း များနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးက ရာသီစက်ဝန်းချင်း မတူညီ တတ်ပါဘူး။ တချို့က ရက် ၃၀ မှာ တစ်ကြိမ် ရာသီလာ တတ်ပြီး တချို့လည်း အဲဒီထက် နောက်ကျ တတ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ရာသီ စက်ဝန်း မတူညီပေမယ့် အဲဒီစက် ဝန်းရဲ့ အလယ်ရက်က သားဥြွေကရက်ပါ။
(၇) ကိုယ်အပူ ချိန်ကို လေ့လာပါ
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်က သင့်ကို သန္ဓေအောင်စေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန်ကို ညွှန်ပြ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သားဥကြွေချိန်မှာ ပရိုဂျက်စတုန်း ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်တာကြောင့် သာမန် ကိုယ်အပူ ချိန်တက် အနည်းငယ် တက်နေ တတ်ပါတယ်။ သားသမီး ရရှိလိုသူတွေ အနေနဲ့ ဒီလို အချိန်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချ နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၈) မိန်းမကိုယ်မှ ထွက်သော အချွဲ အကျိများ သတိထားကြည့်ပါ
သားဥကြွေ ချိန်မှာ မိန်းမကိုယ် ကနေ ချောမွတ်တဲ့ အရည်ကြည် လေးတွေ ထွက်ပါတယ်။ သုက်ကောင်လေးတွေ အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်း ဝင်ရောက်နိုင် အောင်ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှ ကြက်ဥ အကာလို အရည် ကြည်လေးတွေ ထွက်တဲ့ အချိန်ဟာ သား သမီးရရှိနိုင်တဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ဂရုစိုက်ပါ
အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ တင်းကျပ် လွန်းတာ၊ လေဝင် လေထွက် မကောင်းတာတွေက ယောနိလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေ မှာတော့ အတွင်း ခံဘောင်း ဘီကျပ် လွန်းတာ၊ လေဝင် လေထွက် မရှိတာ တွေကြောင့် ဝှေးစေ့ကနေ သုက်ကောင် ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး မျိုးအောင် နိုင်စွမ်းကို လျော့နည်း စေပါတယ်။
(၁၀) သာယာကြည်နူးဖို့ အချိန်ပေးပါ
သားသမီး ရရှိဖို့က အမျိုးသားနဲ့အတူ သာယာကြည်နူးဖို့ အချိန်ပေး တာက အဓိက ကျပါတယ်။ စိတ်ဖိစီး မှုတွေ၊ အလုပ်တွေ အားလုံးကို မေ့ပျောက်ထား ပြီး သာယာကြည်နူးမှု တွေကို ဖန်တီးယူပါ။
မွတ်ဆလင်တွေ သတ်ဖြတ်ခံ ရတယ် ဆိုတဲ့
အထောက် အထားတွေ မတွေ့ရ
Boilsoft Video Splitter v7.02.2 + Key (Lasted Full Version) 14Mb !!!!
Posted by drmyochit Wednesday, January 29, 2014, under Software | No comments
Boilsoft ရဲ့ Video Splitter လေးကပေါ်မလာတာကြပြီ။မနေ့ကမှထွက်လာလို့ဒီနေ့ပဲ Serial key လေး
နဲ့ Full Version တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Movie တွေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ video
တွေကိုကိုယ်လိုချင်သလောက်ပဲဖြတ်မလား ၊ အပိုင်းပိုင်းတွေပဲခွဲမလား cutter to split အမျိုးမျိုးလုပ်လို့
ရတဲ့ဆော့စ်ဝဲပါ။AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP or MP4 video စသည်တို့ကိုလွယ်ကူစွာ split/cut
လုပ်လို့ရပါတယ်။ Output formats အဖြစ်နဲ့လည်း 3GP, AVI, DVD, FLV, iPod, MP3, MP4, MPEG, PSP, RM, SVCD, VCD, VOB and WMV စသည်တို့ကိုရရှိပါတယ်။
- Split, cut or trimalarge video file into several segments
- AVI Splitter, MPEG Splitter, RM Splitter, WMV Splitter all-in-one
- Split video files without re-encoding and quality loss
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/ Windows Vista/Windows 7
ဒူချီရာတန်း အနောက်ရွာမှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
ယခင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားတုန်းက
မောင်တော မြို့နယ် ဒူချီရာတန်း အလယ်ရွာမှာ မွတ်ဆလင်တွေ အစုလိုက် သတ်ဖြတ်ခံ ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမနေ့က ရန်ကုန် မြို့ နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာ အစိုးရ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ညပိုင်းမှာတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အစ္စလာမ် ကျေးရွာ တရွာ ဖြစ်တဲ့ ဒူချီရာတန်း အနောက်ရွာမှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ အိမ်တချို့ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်စပ်သတင်းနဲ့ အစီအစဉ်များရဲပစ်ခတ်မှုကြောင့် တဦးသေကြောင်း အစိုးရ အတည်ပြုစစ်တွေမှာ ရဲက ပစ်လို့ လူအချို့ ဒဏ်ရာရမွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေကို ကျောက်ဖြူမှာ ထားဖို့ စီစဉ်မီးသတ်ကားနဲ့ အတူ မီးလောင်ပြင်ကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ မောင်တော မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကြည်စန်းကို အခင်း ဖြစ်ပွားပုံ အကြောင်း မေးကြည့်တဲ့ အခါ မနေ့ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့ည ၈နာရီ ၄၅မိနစ် က စလောင်တာ ဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် လောင်တာလဲ ဆိုတာကို အတိအကျ မသိရသေးဘူး ၊ ဒါပေမယ့် အိမ်အောက်မှာ ထင်းပုံတွေ တွေ့တယ် ၊ ရှို့မီးလို့ ယူဆကြောင်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုတွေ မတွေ့ရသလို ရွာသားတွေလည်း တယောက်မှ မရှိဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အိမ်ကြီး ၄ လုံး အိမ်သေး ၁၂လုံး မီးထဲ ပါသွားတာကြောင့် အားလုံး အိမ် ၁၆လုံး မီးထဲ ပါသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို သူတို့ အဖွဲ့တွေ ၉နာရီ မိနစ် ၂ဝ မှာ ရောက်ရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ည ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်မှာ မီးညွှန့်ကျိုးသွားတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
သူတို့ရောက်လာချိန်မှာ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘဲ ရွာထဲမှာ အမျိုးသမီး တယောက်သာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်အိမ်က စလောင်တာလဲ ဆိုတာဘဲ သိပြီး ဘာကြောင့်လောင်တာလဲ ဆိုတာကို အဲဒီ အမျိုးသမီးက မပြောနိုင်ဘူးလို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်သူမှ လာပြီး ကူညီတာ မရှိသလို အခုအချိန်မှာ မှောင်နေတော့ ဘယ်သူမှလည်း မတွေ့ဘူးလို့ ဦးကြည်စန်းက ပြောပါတယ်။
အရင်ကလည်း ပေါ့ဆမီးတွေ လောင်ဖူးပေမယ့် ဘေးအိမ်တွေက ဝိုင်းငြိမ်းပေးလေ့ရှိတာကြောင့် အခုလောက် အိမ်အများအပြား မီးထဲပါလေ့ မရှိဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အခုတကြိမ်မှာ ထူးဆန်းတာက ဝိုင်းမငြိမ်းဘဲ ထိပ်ဖက်က စလောင်တာ နှစ်လုံး အလယ်က လေးလုံးနဲ့ ဟိုဖက်က အနောက်က အိမ် ၁ဝလုံး လောင်တာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် အိမ်တွေအောက်မှာ ထင်းပုံကြီးတွေ တွေ့၇တယ် ၊ ဒီထင်းပုံတွေဟာလည်း သုံးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ၊ အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းတွေ အောက်မှာ ဘယ်သူမှ သုံးဖို့ ထင်းပုံတွေ ထားလေ့ မရှိဘူးလို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ အရပ်မှာ လောင်စာ သုံးတာ ရှိမရှိ အခုမှ မီးစက်တွေနဲ့ ရှာဖွေ စစ်ဆေးဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရွာထဲက လူတွေ ထွက်ပြေးတယ် ဆိုတာဟာလည်း ရန်မူလို့ ထွက်ပြေးတာ မဖြစ်နိုင်သလို ရန်မူစရာ အကြောင်းလဲ မရှိဘူးလို့ ဦးကြည်စန်းက ပြောပါတယ်။
အခုတော့ လုံခြုံရေး ချထားရမယ် ၊ ရွာမှာ လူလည်းမရှိ ၊ မီးညွှန့်ကျိုးလို့ မီးလောင်ပြင် ရှင်းလင်းရေး အတွက် လုံခြုံရေး ထားဖို့ လိုတယ်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကြည်စန်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Air KBZ ပိုင်လေယာဉ် ဘီးအပူချိန်လွန်ကဲ၍ မီးခိုးများ ထွက်မှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၂၈
Air KBZ လေယာဉ်တစ်စီးသည် လေယာဉ်တစ်စင်းသည် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်က ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေ ဆိပ်မှ ခရီးစဉ် ထွက်ခွာစဉ်ပြေးလမ်းပေါ်၌ လေယာဉ် Technical Error ကြောင့် လေယာဉ်ပြန် လည်ရပ် တန့်ချိန်တွင် လေယာဉ်ဘီး အပူချိန်လွန်ကဲ၍ မီးခိုင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၅၁ မိနစ်ခန့်တွင် ခရီးစဉ်အမှတ် K၇-၂၆၆ ရန်ကုန်-ဟဲဟိုး-မန္တလေး-ဟဲဟိုး - ရန်ကုန်ခရီးစဉ်တွင် ခရီးသည် ၆၅ ဦး လိုက်ပါသည့် Air KBZ မှ လေယာဉ်သည် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်လေယာဉ် Parking မှ ထွက်ခွာစဉ် လေယာဉ်ပြေး လမ်းပေါ်အရောက်တွင် Technical Error ကြောင့် လေယာဉ် Parking သို့ ပြန်လည်မောင်းနှင်ပြီး ရပ်တန့်ချိန်တွင် လေယာဉ်ဘီးအ ပူချိန် လွန်ကဲ၍ မီးခိုးများ ထွက်လာပြီး လေယာဉ်ဝန်ထမ်းများက မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွင် လေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့် ခရီး သည်များအားလုံး ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ လေယာဉ်ပေါ် မှဆင်း သက် နိုင်ခဲ့ပြီး Air KBZ မှ လေယာဉ်တစ်စင်းဖြင့် ခရီးသည်အား လုံးအား ခရီးစဉ်ပြန် လည်ပြေး ဆွဲပေး ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Air KBZ “ကျွန်တော်တို့ Air KBZ ပိုင် လေယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Safety အပိုင်းကို အပြည့် အဝဆောင် ရွက်ထား ပါတယ်၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်တဲ့မူအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ပြောပြ ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Photoshop လေ့လာလိုသူများအတွက် CS_3 အသုံးပြုနည်းနဲ ...
အလုပ်များလွန်းသဖြင့် လက်ထပ်ရန် မစဉ်းစားနိုင်သေးသည်...
Graphic Design နဲ့ Professional ဓာတ်ပုံဆရာကောင်းဖြ...
Android ဖုန်းကိုင်နေသူများနဲ့Android ဖုန်းပြုပြင...
Phone နဲ့ ကွန်ပျုတာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နည်း ( Androi...
ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဂျပန် မောင်းသူမဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘော ပြန...
မွတ်ဆလင်သူပုန်များကို အစွမ်းကုန်ဖြိုခွင်းမည်ဟု ဖိလ...
Pee Mak ထိုင်းမင်းသမီးလေး မြန်မာပြည်လာတုန်းက ဘုရား...
သူ့အတွက် နားထောင်ကောင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ (အမ...
ခုခေတ်မှာ အချစ်ဆိုတာ ဖူးစာမဟုတ်တော့ပဲ ဦးရာ ဖြစ်သွ...
အသဲပုံ မျက်နှာလိုချင်လို့ ကိုရီးယားမလေး ခွဲစိတ်ပြု...
တရုတ်နှင့် ပေါင်းပြီး သစ်ခိုးထုတ်သည့် အဖွဲ့ကို ဖမ်...
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (အပု...
Boilsoft Video Splitter v7.02.2 + Key (Lasted Full...
Air KBZ ပိုင်လေယာဉ် ဘီးအပူချိန်လွန်ကဲ၍ မီးခိုးများ...